घ्यु कुमारी यसरी प्रयोग गर्न जान्ने हो भने दर्जनौं रो’गबाट मुक्त – Online Khabar 24
घ्यु कुमारी यसरी प्रयोग गर्न जान्ने हो भने दर्जनौं रो’गबाट मुक्त
घ्युकुमारी एक जडिबुटी हो । यो प्राय जसो सबैको घरमा सजिलै पाईन्छ । शहर बजारतिर घरको छतमा, आँगनमा गमलामा रोप्ने गरिन्छ भने कुनै ठाउँमा यसको खेती नै गरिन्छ।
घ्युकुमारीलाई आर्युवेदिक औषधीका रुपमा लिइन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।
४, शरीरको कुनै भागमा आगोले पोलेमा, काटेमा यसको रस निकालेर लगाउनाले घाउ निको हुनुका साथै आराम मिल्छ । आजभोली घ्युकुमारीलाई कस्मेटिक प्रोडक्टका रुपमा बजारमा यसको जेल, बडीलोशन, हेयरजेल, स्किनजेल, साबन, फेशियल फोम, ब्यूटीक्रिमका रुपमा पनि उपयोगमा ल्याइएको पाउन सकिन्छ।
६, यसले उच्च रक्तचापका बिरामीका लागि पनि घ्युकुमारीको जुस लाभदायक हुन्छ । घ्युकुमारी खानाले क्यान्सरका ट्युमरको विकास र वृद्धिमा विराम लाग्छ । घ्युकुमारीमा शरीरको रोगप्रति रोधी क्षमता बढाउने तत्व हुन्छ। घ्युकुमारी खाँदा शरीरमा भिटामिन र खनिजको मात्रा बढ्न पुग्छ । साभार गरियको खबर
Prevदसैँमा विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरा पढिहाल्नुस नत्र पछुतो होला !
nextके तपाईंलाई थाहा छ ? प्याजले करिब तीन घण्टा यौ’न आनन्द दिन्छ,कसरी प्रयोग गर्ने ?